Andraikitry ny tsirairay ny fanatsarana ny tontolo iainana | Région Boeny
Notontosaina tao amin’ny trano fandraisambahiny Les Roches Rouges ny 23 sy 24 septambra 2014 lasa teo ny atrik’asa fanofanana ho an’ireo mpikambana ao anatin’ny Komitim-paritra mpanara-maso ny tontolo iainana eto Boeny (CRSE).
Ny Ofisim-pirenenena momba ny tontolo iainana (ONE) no nanome ny fiofanana rehetra nandritra izay roa andro izay. Ny Fandaharan’asa alemaina sy malagasy momba ny tontolo iainana (PGM-E) kosa no miandraikitra ny famatsiam-bola rehetra mandritry ny taona 2014.
Ny enim-bolana voalohany dia natokan’ny Komity ho fanatanterahana ny asa tokony hataon’ny sampandraharam-paritra voakasik’ity CRSE ity sy ny Distrika enina ato anatin’ny Faritra Boeny ary ny fikambanana Komanga. Nohamafisian’ireo mpikatroka ireo tamin’ny fanaovantsonia ny fifanekena fiaraha-miasa izany. Ny tena andraikitr’izy ireo moa dia miompana indrindra amin’ny fitrandrahana vaovao sy manara-maso ny asan’ireo mpampiasa vola ka ahina mety hanohitohina ny tontolo iainana ny fandraharahana ataony.
Tsiahiviana fa ny Lehiben’ny Faritra no filoha mpitarika ny CRSE, ary niainga tamin’ny lalanam-paritra momba ny tontolo iaianana navoakany no nanangana izany. Nisolo tena azy nandritra ity atrik’asa ity ny Talem-paritry ny fampandrosoana ny faritra, Atoa Johanesa Fernand izay nanamafy fa ny andraikitry ny tsirairay dia ny fanatsarana ny tontolo iainana ary nirary izy mba ho tanàna maintso amin’izay ny Faritra Boeny.
Tsy hisalasalana ny hahombiazan’ny CRSE hametraka izany tontolo maitso eto raha efa azo antoka ny famatsiam-bola hiasany. Mbola baraingo nefa ny amin’izay, na dia izay ho ampiasainy amin’ny taona 2015 fotsiny aza.
CHAHER, Assistant chargé
de Communication Région Boeny